Iindaba - Malunga ne ketchup
Malunga ne ketchup
I-sauce yenyani enkulu evelisa i-tomato isasazwa eMntla Melika, unxweme lweMeditera kunye neendawo zaseMzantsi Melika. Ngo-1999, ukuveliswa kweetumato kwihlabathi liphela, imveliso yeetumato inyuswe nge-20% ukusuka kwizigidi ezili-3.14 zeetoni kunyaka ophelileyo ukuya kwi-3.75 yezigidi zeetoni, zafikelela kwelona zinga liphezulu ezimbalini. Unikezelo lwempahla ekrwada kunye neemveliso zigqithisile kwimfuno, amazwe amaninzi anciphisa indawo yokutyala ngo-2000. Iziphumo ezipheleleyo zezinto zetumato ezingalungiswanga kumazwe ali-11 aphambili avelisayo ngo-2000 zazimalunga neetoni ezingama-22.1 ezigidi, ezaziziipesenti ezili-9 ezantsi Kunoko kwabhalwa ngo-1999. I-United States, iTurkey kunye ne-Western Mediterranean amazwe ehle nge-21%, i-17% ne-8% ngokwahlukeneyo. I-Chile, iSpain, iPortugal, i-Israel kunye namanye amazwe nawo abe nokuhla kwimveliso yezinto zokwenza iitumato. Ukugqitha kulo nyaka uphelileyo kukwavelise eyona nto ibalulekileyo kwimveliso yetumato ngo-2000/2001 Isiphumo se-tomato paste kumazwe avelisayo (ngaphandle kwe-United States) sehle nge-20% ngokomndilili, kodwa inani elipheleleyo lokuthumela ngaphandle lonyuke nge-13% xa kuthelekiswa Kunyaka ophelileyo, ubukhulu becala bevela e-Itali, Portugal ne Greece.
I-United States ngoyena mvelisi mkhulu nomthengi weemveliso zetumato. Iitumato zayo ezigqityiweyo zisetyenziselwa ukuvelisa i-ketchup. Ngo-2000, ukuhla kwemveliso yetumato eyenziweyo kwakusenzelwa ukunciphisa uluhlu lweemveliso zetumato kunyaka ophelileyo kunye nokunyusa amaxabiso emveliso edandathekileyo ebangelwe kukuvalwa kwabalimi beTri Valley, eyona mveliso inkulu yetumato. Kwiinyanga ezili-11 zokuqala zika-2000, ukuthunyelwa kweemveliso zetumato e-US kwehle nge-1% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo lonyaka ophelileyo, ngelixa ukuthunyelwa kwemveliso yetumato kwehle nge-4%. ICanada isengumkhokeli wezinto zangaphandle zetumato kunye nezinye iimveliso ezivela eUnited States. Ngenxa yokwehla okubukhali kokungeniswa kwezinto e-Itali, umthamo weentengo zetumato e-United States wehle nge-49% kunye ne-43% ngo-2000.
Ngo-2006, inani elipheleleyo lokulungisa iitumato ezisehlabathini zazimalunga neetoni ezingama-29 ezigidi, i-United States, i-European Union kunye ne-China zibekwa phakathi kwezintathu eziphezulu. Ngokwengxelo yombutho wetumato wehlabathi, kwiminyaka yakutshanje, i-3/4 yetotali evelisiweyo isetyenziselwa ukuvelisa i-tomato, kwaye imveliso yonyaka ye-tomato emhlabeni i malunga ne-3.5 yezigidi zeetoni. I-China, i-Itali, iSpain, iTurkey, i-United States, iPortugal kunye ne-Greece zibala i-90% yentengiso yetumato yokuthengisa ngaphandle. Ukusuka ngo-1999 ukuya ku-2005, isabelo se-China sokuthumela ngaphandle i-tomato sonyuke ukusuka kwi-7.7% ukuya kwi-30% yentengiso yokuthumela ngaphandle, ngelixa abanye abavelisi bebonisa ukwehla. I-Itali yehlile ukusuka kwi-35% ukuya kwi-29%, iTurkey ukusuka kwi-12% ukuya kwi-8%, kunye neGrisi ukusuka kwi-9% ukuya kwi-5%.
Ukutyala iitumato eTshayina, ukuqhuba kunye nokuthumela kwelinye ilizwe zikwindlela yokukhula okuzinzileyo. Ngo-2006, i-China yaqhuba i-4.3 yezigidi zeetoni zetamatato entsha zaze zavelisa phantse iitoni ezingama-700000 zepasta.
TSHINTSHA OOMATSHINI (SHANGHAI) LIMITED iimveliso eziphambili kukuncamathisela iitumato, iitamatisi ezixobukile okanye iziqwenga ezaphukileyo, unama i-tomato, ipasta yetomato, i-lycopene, njl. I-30% kunye ne-36% -38%, uninzi lwayo lupakishwe kwiingxowa ezingama-220 ze-aseptic. I-10% -12%, i-18% -20%, i-20% -22%, i-22% -24%, i-24% -26% i-tomato sauce igcwaliswe ngetoti ye-tinplate, iibhotile ze-PE kunye neebhotile zeglasi.